Intel na nsogbu ọzọ, chọpụta nchapu data | Site na Linux
Otu ìgwè nke Ndị nchọpụta Mahadum nke Illinois wepụtara na nso nso a ka ha mepụtara uzo ohuru ohuru ohuru nke na-enye ohere ịghachị ọnya ozi ahụ site na njikọ mgbanaka nke Intel processors.
Banyere ụdị ọgụ ọhụrụ a ataala atụmatụ atọ nke ga-enyere gị aka ime ihe ndị a:
Weghachite onye ibe igodo nzuzo mgbe ị na-eji RSA na mmejuputa EdDSA ndị na-adighi ike ịwakpo ọwa n'akụkụ (ma ọ bụrụ na nghazi oge na-adabere na data a na-arụ). Ọmụmaatụ, mmadụ ntakịrị ihi mmiri nwere ozi gbasara EdDSA nonce vector zuru ezu iji ọgụ wakporo iji weghachite igodo nzuzo niile. Mwakpo ahụ siri ike itinye n'ọrụ ma nwee ike iji nnukwu ọnụọgụ mee ya. Dịka ọmụmaatụ, arụ ọrụ na-aga nke ọma na-egosipụta site na ịgbanye SMT (HyperThreading) na ịkekọrịta oghere LLC n'etiti cores CPU.
Kọwaa ọnụọgụ na igbu oge dị n'etiti isi ihe. Oge igbu oge dabere na ọnọdụ nke igodo ma nye ohere, site na nyocha ọnụ ọgụgụ, iji weghachite data abanye na keyboard na ụfọdụ puru omume (dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ mmadụ na-achọkarị pịnye "s" mgbe "a" ọtụtụ ngwa ngwa karịa "g" mgbe ahụ "s").
Hazie ọwa nkwukọrịta nzuzo iji nyefee data n'etiti usoro na ọsọ nke ihe dịka 4 megabits kwa nke abụọ, nke anaghị eji ebe nchekwa, ihe nhazi ihe nhazi, ma ọ bụ usoro nhazi ụfọdụ na ihe onwunwe CPU. Achọpụtara na usoro a chọrọ iji mepụta ọwa mmiri na-esiri ike igbochi site na usoro nchebe dị ugbu a megide ọgụ site na ọwa n'akụkụ.
Ndị nchọpụta ahụ ha na-ekwupụtakwa na ịkpa ahụ anaghị achọ ihe ùgwù dị elu ma nwee ike iji ya na ndị ọrụ oge niile enweghị ikike, ha kwukwara na mbuso agha ahụ nwere ike nwere ike ahaziri iji hazie data leakage n'etiti mebere igwe, ma nsogbu a karịrị akarị nke usoro nyocha na usoro nyocha adịghị anwale.
A nwalere koodu a chọrọ na Intel i7-9700 CPU na Ubuntu 16.04 gburugburu. Na mkpokọta, a nwalere usoro mwakpo ahụ na Intel Coffee Lake na Skylake desktọọpụ processors, na ọ nwere ike na ọdabara na Broadwell Xeon server processors.
Ntanetị Ring Interconnect pụtara na ndị nrụpụta dabere na Sandy Bridge microarchitecture ma mejupụta ọtụtụ ụgbọ ala loopback ndị ejiri jikọta kọntaktị na eserese eserese, northbridge na cache. Ihe kachasị mkpa nke usoro ọgụ a bụ na n'ihi oke bandwidth nke ụgbọ ala mgbanaka, arụmọrụ ebe nchekwa n'otu usoro na-egbu oge ịnweta ebe nchekwa nke usoro ọzọ. Ozugbo enwetara nkọwa mmejuputa ya, onye na-awakpo ya nwere ike iwepụta ụgwọ ọrụ nke na-eduga na ịnweta ohere nchekwa na usoro ọzọ ma jiri data igbu oge dị ka ọwa n'akụkụ iji nweta ozi.
Mmegide na ụgbọ ala CPU dị n'ime ya na-egbochi enweghị ozi gbasara usoro na usoro ọrụ nke ụgbọ ala, yana oke mkpọtụ nke na-eme ka o sie ike iwepụta data bara uru. O kwere omume ịghọta ụkpụrụ nke bọs site na injinịa nke usoro ogbugba ejirila mgbe ị na-ebufe data n'elu bọs. Iji kewaa ozi bara uru na mkpọtụ, etinyere usoro nhazi data dabere na usoro mmụta igwe.
Ihe omuma a emeputara mere ka o kwe omume ịhazi nlekota nke igbu oge mgbakọ na usoro a kapịrị ọnụ, na ọnọdụ nke ọtụtụ usoro n'otu oge nweta ebe nchekwa na akụkụ nke data weghachitere site na ihe nhazi processor.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọzọ akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Intel nwere nsogbu ọzọ, ha na-achọpụta ọnya data
Dolt a Git-style nchekwa data usoro